အားနွဲ့ မိန်းမသားလေး မို့ ချစ်လွန်းလို့ အသဲယားရင် သုံးချက် သို့မဟုတ် ငါးချက် ထိုးတတ်တယ် ဆိုတဲ့ ‘ရှင်ယွန်းမြတ်’ – Shwe Naung
အားနွဲ့ မိန်းမသားလေး မို့ ချစ်လွန်းလို့ အသဲယားရင် သုံးချက် သို့မဟုတ် ငါးချက် ထိုးတတ်တယ် ဆိုတဲ့ ‘ရှင်ယွန်းမြတ်’
ပရိသတ်ကြီးရေ ‘ရှင်ယွန်းမြတ်’ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ အနုပညာ ရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမ ကတော့ မြင်သူ တကာ ငေးမောလောက်တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းအလှတွေကြောင့် ချစ် ပုရိသတွေရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှုကို ရယူထားထား သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စတိုင် ခပ်မိုက်မိုက် နဲ့ ဆွဲဆောင်မှု အားပြင်းတဲ့ ‘ရှင်ယွန်းမြတ်’က အခုလည်း ချစ် ပုရိသတွေ ကြွေကျသွားအောင် ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ ဖမ်းစားလိုက်ပြန်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာ လည်း အသားကပ် ဝတ်စုံလေးနဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျအမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေကို “ကျမ က အားနွဲ့သူ မိန်းမသားမို့နွဲ့ဆိုးဆိုးပြီး. အသဲယားရင် သုံးချက် ထိုးတယ်👊👊👊 ( မိန်းခလေးသဘာဝ စိတ်ဆိုးပြီ ဆိုရင်တော့ငါးချက် ထိုးတတ်တယ်👊👊👊👊👊 ကျမ ဆိုးတဲ့ နွဲ့တဲ့ဒဏ် ခံနိုင်မှ ကျမ ဘဝထဲ ဝင်လာခဲ့ပါ….နော်😍😍😍(အားနွဲ့သူလေး)”ဆိုတဲ့ ‘Caption’လေးနဲ့အတူ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ပုံလေးထဲမှာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ အခါခါ ပြန်ကြည့်ချင်မိအောင် အလွန် လန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။’ရှင်ယွန်းမြတ်’ရဲ့ဖက်ရှင် ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ချစ် ပရိသတ်တွေ ကြိုက်နှစ်သက်ကြမှာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီး အတွက် ‘ရှင်ယွန်းမြတ်’ရဲ့ ပုံလေးကို မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ရက် တွေမှာလည်း အသစ်အသစ်လေးတွေ ထပ်မံတင်ဆက်ပေးဦးမှာ ဖြစ်လို့ ‘Pageလေးကိုlike &Follow’ လေးလုပ်ခဲ့ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ ဖတ်ရှုအားပေး သောချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်းသာယာပျော် ရွှင်သောနေ့လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ လို့ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
Source : Shin Yoon Myat Facebook Page
ဒီနေ့မှာ လည်း အသားကပ် ဝတ်စုံလေးနဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျအမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေကို “ကျမ က အားနွဲ့သူ မိန်းမသားမို့နွဲ့ဆိုးဆိုးပြီး. အသဲယားရင် သုံးချက် ထိုးတယ်🤜🤜🤜 ( မိန်းခလေးသဘာဝ စိတ်ဆိုးပြီ ဆိုရင်တော့ငါးချက် ထိုးတတ်တယ်👊👊👊👊👊 ကျမ ဆိုးတဲ့ နွဲ့တဲ့ဒဏ် ခံနိုင်မှ ကျမ ဘဝထဲ ဝင်လာခဲ့ပါ….နော်😍😍(အားနွဲ့သူလေး)”ဆိုတဲ့ ‘Caption’လေးနဲ့အတူ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ရှင်ယွန်းမြတ်ရဲ့ ရင်ဖိုစရာ ပုံရိပ်လေးများ….
ကောင်းကင်ပြာ ပန်းချီတွေ ကြားမှာ အရမ်းကိုယ် ကိတ်လွန်း နေတဲ့ သူမရဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ပုံတွေတင်ပေး လိုက်တဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်……
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းတွေနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ လှပနေတဲ့ ချောကလျရဲ့ ပုံလေးများ….